Tim Cook oo ku saabsan amarka Trump ee kahortaga socdaalka: "Ma ahan siyaasad aan taageersanahay" | Waxaan ka socdaa mac
Tim Cook oo ku saabsan Amarka Trump ee Soogalootiga: 'Ma ahan Siyaasad aan Taageersanahay'
Toddobadii maalmood ee ugu horreysay ee uu ku sugnaa Aqalka Cad, Donald Trump ma uusan niyad jabin taageerayaashiisa iyo dadka soo doortay. Jimcihii la soo dhaafay, madaxweynaha cusub ee Mareykanka, Donald Trump, wuxuu saxiixay mid ka mid ah ballanqaadyadiisii ​​ugu muranka badnaa (marka lagu daro darbiga Mexico, daadinta Obamacare ...) Waa amar fulineed oo ah astaan ​​astaan ​​u ah soogalootiga sida ku cad taas, iyo ugu yaraan saddex bilood, Muwaadiniinta ka soo jeeda toddobo dal oo u badan Muslimiin ayaa laga mamnuucay inay soo galaan Mareykanka: Iiraan, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Intaas waxaa dheer, barnaamijka gargaarka qaxootiga sidoo kale waa la joojiyay. Donald Trump wuxuu sheegay in hadafku yahay in "argagixisada islaamiga xagjirka ah" laga fogeeyo Mareykanka.
Iyadoo wajahaysa go'aankan, Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu fariin u diray dhamaan shaqaalaha shirkada Sabtidii isagoo sheegay taas Apple ma taageerto amarrada fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump ee lagu xadidayo socdaalka Mareykanka. Qoraalka, waxaa helay qarka u saaran, Tim Cook ayaa sharxaya taas amarka "ma ahan siyaasad aan taageersanahay".
Tim Cook iyo Apple, oo ka soo horjeedda siyaasadda Donald Trump ee ka soo horjeedka socdaalka
Tim Cook ayaa xusay taas waxaa hore u jiray shaqaale Apple ah oo amarku saameynayo iyo inay la soo xiriireen shaqaalaha Apple, kooxaha sharciga iyo amniga. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay la xiriirtay Aqalka Cad si ay u sharaxdo saameynta ay ku leedahay shaqaalaheeda iyo shirkadda guud ahaan.
Laakiin Apple iyo Tim Cook kaliya maahan kuwa mowqif ka qaadanaya tallaabooyinkan. Ururo badan oo difaaca xuquuqda aadanaha waxay si toos ah uga hadlaan "cadaadis diimeed". Isla markaana, Maamulaha guud ee Facebook Mark Zuckerberg Wuxuu muujiyay walaac isagoo cadeeyay "Waxaan ubaahanahay inaan ilaalino wadankaan amaan, laakiin waa inaan sidaa yeelnaa anagoo diirada saareyna dadka runtii qatarta leh.
Dhinaca kale, Sundar Pichai, ee Google, ayaa xaqiijiyay, sidoo kale fariin ku socota shaqaalaha shirkadda, "Waxaan ka xanaaqnay saameynta amarkan iyo soo jeedin kasta oo xayiraad ku soo rogi karta Googlers iyo qoysaskooda, ama abuuri karta caqabado keenista hibo weyn Mareykanka. Waa wax xanuun badan in la arko qiimaha shaqsiyeed ee amarkan fulineed ee asxaabtayada.
Tani waa Farriinta Cook oo dhammaystiran shaqaalaha Apple:
Wadahadalkii aan kula yeeshay saraakiisha halkan Washington toddobaadkan, waxaan si cad ugu sheegay in Apple ay si qoto dheer u aaminsan tahay muhiimada socdaalka, shirkadeena iyo mustaqbalka qarankeena. Apple ma jiri doono laanta socdaalka la'aanteed, iskaba daa inay kobciso oo ay wax u cusbooneysiiso sida aan sameyno.
Waxaan ka maqlay inbadan oo idinka mid ah oo si qoto dheer uga walaacsan amarka fulinta ee shalay la soo saaray ee xaddidaya socdaalka ka imanaya toddobo dal oo u badan Muslimiin. Waxaan la wadaagayaa walaacaaga. Ma ahan siyaasad aan taageersanahay.
Waxaa jira shaqaale ka tirsan Apple oo ay toos u saameysay amarka socdaalka ee shalay. Shaqaalaheena Shaqaalaha, Sharciga, iyo Amniga ayaa xiriir la leh iyaga, Applena waxay sameyn doontaa wax kasta oo suurtagal ah si ay u taageeraan. Waxaan ku siineynaa kheyraad AppleWeb qof kasta oo qaba su'aalo ama walaac ku saabsan siyaasadaha socdaalka. Oo waxaan u nimid Aqalka Cad si aan u sharaxno saamaynta taban ee ay ku yeelan karaan shaqaalahayaga iyo shirkadeena.
Sidaan marar badan idhi, kala duwanaanta ayaa kooxdeena ka dhigaysa mid xoogan. Hadana haddii ay jirto hal shay oo aan ka aqaanno dadka ku nool Apple, waa qoto-dheerida is-nacaybkeenna iyo is-taageeriddeenna. Waa muhiim sidii ay hada ahaan jirtay, mana yara wiiqi doono xoogaa. Waan ogahay inaan isku hallayn karo dhammaantiin si aan u hubiyo in qof walba oo Apple ka tirsan uu dareemayo soo dhaweyn, ixtiraam, iyo qiimeyn.
Tufaaxu waa furan yahay. Waxay u furan tahay dhammaan, iyadoon loo eegayn halka ay ka yimaadeen, luqadda ay ku hadlaan, cidda ay jecel yihiin ama sida ay u jecel yihiin. Shaqaalaheenu waxay matalaan tayada ugu fiican adduunka kooxdeenuna waxay ka timaaddaa dhammaan daafaha adduunka.
Erayada Dr. Martin Luther King, "Waxaa suuragal ah inaan ku nimid doonyo kala duwan, laakiin hadda waxaan ku wada jirnaa hal doon."
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tim Cook oo ku saabsan Amarka Trump ee Soogalootiga: 'Ma ahan Siyaasad aan Taageersanahay'
Jeelka loogu talagalay tvOS 10.1 wuxuu noqon karaa mid dhab ah